Semalt: Nzira yekudzivirira Pop-Ups Mu Chrome
Kana iwe uchipedza nguva yakawanda paIndaneti, unogona kusvika kune zvipikisa zvinosuruvarisa uye zvisingazivikanwi nenzira yepop-ups, mabhendi ads, uye auto-playing ads. Max Bell, iyo Semalt Mutengi Achibudirira Mutapiriri, anotsanangura kuti zvose izvi zviziviso hazvidzivirike, asi zvinokwanisika kutora matanho kuti adzose vose.
Dzora matanho ep-up mu Chrome uchishandisa browser browser:
Kunyange zvazvo mahwendefa akasiyana-siyana ekudzivirira matanho anogona kushandiswa neGoogle Chrome, purogiramu yakanakisisa iAdblock Plus. Inoshanda zvinyararire mumucheto we browser yako uye haibvumi kuti zvivako zvikugumise. Kana uri kushandisa Firefox, haugoni kushandisa iri plugin. Zvisinei, mamwe mamwe mapaji akafanana anowanikwa kune vashandisi veFoodfox - make own music online free. Iwe unongoda kutora uye kuisa Adblock Plus uye usakanganwa kuigadzira. Plugin ichabatanidzwa ne Chrome yako browser, kudzivirira ma-pop-ups kubva pakuratidza kwemazuva mashoma.
Chii chinonzi Adblock Plus?
Sezvatotaurwa, Adblock Plus ipirgin inogona kubatanidzwa neGoogle Chrome browser. Zivhura mu Chrome yako yekusvitsa uye shanyira Chrome Web Store, yakateverwa neAdblock Plus Extension peji. Pano, uchaona bhou rebhuruu mukona yakarurama, uchiti kuwedzera kune Chrome..Iwe unofanira kutora icho chisarudzo, uye kuwedzerwa kuchakanganwa pakarepo. Kana imwe nguva yakashandiswa zvakazara, haufaniri kutangazve mawindo ako kana web browser sezvo Adblock Plus ichatanga kumhanya pachayo. Izvi zvinowedzera kuwedzera chiratidzo chiduku chekundu mukona yakarurama ye browser yako. Penguva ipi zvayo, zvinogona kuti iwe uone pane iyo uye ona data pamusoro pekuti zviziviso zvakadzivirirwa pazvigadzirwa zvako. Iwe unogonawo kuvhara mamwe masayiti kana mapeji ose uye uchinje matanho anotarirwa kubva muChechi yeChitoro.
Adblock Plus haigoni kudya zvimwe zvinyorwa, zvichienderana nemichina uye maitiro. Kana iwe ukawana dambudziko iri, unofanira kufanidza paIndaneti uye reka chekuita Ivha iyi Webhusaiti kuti ishandise maitiro ese ekudzivirira matanho kubva pakarepo. Zvimwewo, unogona kuzvidzivirira kubva pane ad ad blocker nekudzorera mapeji ane zvinyorwa kana zvinyorwa zvingada kuongorora nekuverenga. Kana zvose zvikaitwa zvakanaka, iwe ucharamba uchiverenga zvinyorwa zvinowanzo.
Unofanirwa kuyeuka kuti Adblock Plus haibvumiri kuti matangazo ose e-pop-up achavharwa muGoogle Chrome browser, asi inotora vazhinji vavo. Kune dzimwe makambani ekuchena uye mabhii ayo anotora zvakanyanya kuti zvivako zvavo zvisabatanidzwe ne-ad-blockers. Nenguva isipi, makambani anotengesa kazhinji pamashambadzi akadai; zvinoreva kuti iwe unogona kuvhara zvinenge zvose zvivako kubva panzvimbo dzako uye web browser.
Poper Blocker Zvakanaka ndeimwe nzira yeAdblock Plus. Icho chinhu chakanakisisa chekushandisa, iyo isiri yakaderera. Kana iwe uchida hurongwa huri nyore asi hunoshamisa husingaiti huwandu hwezvitsvaga zvep-up uye zvinangwa zvinongopedzisira kuitika, tinokurudzira kuti uedze Poper Ad Blocker. Icho chinoita kuti tipe zviziviso nokukurumidza pamusoro pekuti iwe unodzivisa imwe pape-up kana kwete uye inokubvumira kuchengetedza nguva yakawanda. Uyezve, zviziviso zvaro zvinotibvumira kana kubvisa matanho ep-up asi isu tisingadi kuona mune ramangwana.